I-China Hydraulic Foldable Laydown Lighting Towers i-KLT-10000 abavelisi kunye nabathengisi | Ngokukhanyayo
Matel halide / ngesanti kubunzulu baphantsi
Inqaba yokuqala yokukhanya emhlabeni enomjelo wokugoba ngesanti kubunzulu baphantsi. I-KLT-10000 iguqule imarike iminyaka emininzi, yaba yeyona ndlela iphambili yokuthengisa inqaba yokukhanya eTshayina. Enkosi kumbane we-4x1500W wesinyithi esinamandla kunye ne-9.8 yeemitha zemasti, i-KLT-10000 inokukhanyisa iindawo ezinkulu kakhulu zokusebenza.
I-KLT-10000 yokuKhanya kweNqaba
I-KLT-1000 yeyona modeli ithengisa kakhulu kwintengiso yokukhanya kwimarike yamaTshayina enkosi kwimasti yokusonga i-hydraulic kunye neempawu ezikumgangatho ophezulu ezinikezwe yiFuzhou Brighter Electromechanical Co, Ltd.
I-KLT-10000 ixhotyiswe ngomlawuli wedijithali ofundelwe ngokukodwa ukulawula yonke imisebenzi yenqaba yokukhanyisa ukuze kube lula ukusetyenziswa.
Izibane zeMetal Halide
I-4x1500W izibane ezinamandla ze-metal halide ezikwazi ukukhanyisa indawo zokusebenza eziphakathi nendawo ezinkulu.
Ungakhetha injini oyithandayo phakathi kweKubota neYanmar.
Unyaka o-1 okanye iiyure ezili-1000 zokusebenza nokuba yeyiphi eza kuqala.
2.Zithini iimveliso ozenzayo?
Fuzhou eqaqambileyo Electromechanical Co., Ltd. Ngaba yenye yezona zinto zivelisayo kwiLight Light, enekomkhulu layo e-Shenzhen China.
3.Yintoni imiqathango yakho yentlawulo?
T / T 30% kwangaphambili kunye T / T 70% eseleyo ihlawulwe phambi zimpahla / 100% LC.
4. Ngaba unayo umzi-mveliso wakho?
Sineminyaka engaphezu kwama-10 yamava kule nkalo kwaye samkelekile kumzi-mveliso wethu kuhambo lokuhlola.
Ukubona okanye uku-odola i-KLT-10000, tsalela umnxeba kwi-86.0591.22071372 okanye undwendwele lomhlaba com.
Ubukhulu obuncinci 3400 × 1580 × 2360mm
Ubukhulu obukhulu 3400 × 1850 × 8500mm
Ubunzima obomileyo 1860kg
Inkqubo yokunyusa Ngesanti kubunzulu baphantsi
Ujikelezo olukhulu 360 °
Izibane zamandla 4 × 1500W
Uhlobo lwezibane MH
I-lumen iyonke 360000lm
indawo ekhanyayo 6000㎡
Injini Kubota D1105 / V1505
Isantya senjini (50 / 60Hz) 1500 / 1800rpm
Isiqulatho solwelo (110%) √
Enye into (KVA / V / Hz) I-8/220 / 50-8 / 240/60
Iplagi socket (KVA / V / Hz) 3/220 / 50-3 / 240/60
Uxinzelelo lwengxolo 67 dB (A) @ 7m
Ukumelana nesantya somoya 80km / h
Egqithileyo I-Hydraulic Foldable LED yokukhanyisa iiTowers KLT-10000LED
Okulandelayo: UkuKhanya okuKhanya ngokuKhanya okuphezulu-KLT-6500
Idizili yedizili yokuKhanyisa iNqaba
Inqaba yokukhanyisa idizili
Idizili yokuKhanyisa amandla kwiNqaba
Inqaba yombane yokukhanyisa umbane